राप्ती लाईफ केयरमा पाँच बेडको एनआईसियु सेवा « Online Rapti
राप्ती लाईफ केयरमा पाँच बेडको एनआईसियु सेवा
तुलसीपुर, १७ पुस । दाङको तुलसीपर उपमहानगरपालिका ५ स्थित राप्ती लाईफ केयर हस्पिटल प्रालिले सेवालाई थप प्रभाबकारी बनाएको छ ।हस्पिटलले अहिले एनआईसियु सेवालाई पाँच बेडको बनाएको हस्पिटलका प्रबक्ता जीवन भण्डारीले बताए । हामीले एनआईसियु सेवालाई पनि थप प्रभाबकारी बनाएका छौं’ उनले भने‘ अहिले पाँच बेडको बनाएका छौं ।’ आम नागरिकको मागका आधारमा सेवालाई प्रभाबकारी बनाउदै लगेको उनको भनाई छ । उनले आम नागरिकको माग बमोजिम सेवा थप गर्नुका साथै प्रभाबकारी बनाउँदै लगेको बताएका छन् ।
अब वालवालिकाको प्रभाबकारी सेवा राप्ती लाईभकेयरमै पाईने उनको भनाई छ । उनका अनुसार अहिले वालवालिका सम्बन्धि बालरोग बिशेषज्ञ डा. बुद्धि गुरुङले हेरिरहेको समेत बताए । यस्तै अस्पतालमा गएको महिना मात्रै ४ वटा एपेन्डिसाइटिस्का बिरामीको सफल अप्रेसन गरिएको छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय अस्पतालमा यो सेवा लिन आउने विरामीको संख्या पनि बढेको छ । डा. सुनिल खनियासहितको टोलीले अहिले अस्पतालमा एपेन्डिसाईडको अप्रेसन गरिरहेको समेत उनले बताए ।
साथै अस्पतालले गएको महिनामा ५१ जना हाड भाँच्चिएका विरामीको उपचार गरेको समेत बताए । डा. सवल गैरेसहित चिकित्सकहरुले टोलीले अहिले उपचार गरिरहेको समेत प्रबक्ता भण्डारीको भनाई छ । पछिल्लो समय अस्पतालले जटिल प्रकृतिका बिरामीहरुको समेत उपचार गरिरहेको छ । यसरी जटिल प्रकृतिका बिरामीहरुको सफल अप्रेसन भएपछि विरामीको संख्यापनि बढ्दै गएको हो ।